NS Malagasy Archive | NewsMada | Page 6
Par Taratra sur 14/05/2019 Faits Divers, NS Malagasy
Ny zandary (GST) Rakotoarison Mamisoa Christian miasa ao amin’ny borigadin’Ampasinambo Mananjary no nakarina haingana aty an-dRenivohitra noho ny tsy fahasalamany. Nigadona tao Betongolo, omaly maraina, ny helikoptera manokana nitondra azy izay mila fitsaboana faran’izay haingana noho ny tsy fahasalamana mahazo azy. Efa nahazo fitsaboana eny amin’ny Hopitaly miaramila eny Soavinandriana (Homi) izy amin’izao fotoana izao. Ny […]
Par Taratra sur 14/05/2019 NS Malagasy, NS-Politique
Efa maka bahana. Nivory efa herinandro ary mbola hitohy hatramin’ny zoma ho avy izao ny eo anivon’ny Fivondronamben’ny eveka (Fem). Tanterahina eny Ambatoroka izany fihaonana izany ary efa fanao isan-taona ny volana mey tahaka izao. Na izany aza, hiavaka ny amin’ity indray mandeha ity noho ny fitsidihan’ny papa François eto amintsika, ny volana septambra ho avy […]
Nizerianina: haka traikefa amin’ny zandarimaria
Tonga nanao fitsidihana tamim-pomba ofisialy tao amin’ny kabinetran’ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena (Seg), ny Jly Rakotoarison Anthony, omaly teny Betongolo, ireo solontenan’ny Sekoly etamazaoro (EEM) nizerianina . Tonga hanao fitsidihana manokana ireo sekoly miaramila rehetra eto Madagasikara izy ireo hakana traikefa momba ny fiarovana, ny fandriampahalemana sy ny toetr’andro ary ny lafiny toekarena. Naneho ny […]
Mpivaro-drongony: tratra indray raha vao nivoaka ny fonja
Par Taratra sur 14/05/2019 Divers, NS Malagasy
Saron’ny polisy teny Anosipatrana Atsinanana, ny asabotsy teo, ny lehilahy iray 53 taona, malaza ratsy amin’ny fivarotan-drongony sy ny fifohana rongony. Nifanojo tamin’ireo polisy nanao fisafoana ity lehilahy ity ka izao noraisim-potsiny izao. Nandritra ny fitsirihana natao tamin’ny kitapo nentin’ilay lehilahy no nahitana rongony milanja 240 grama natao tanaty fonosana miisa 24. Nilaza izy, nandritra ny famotorana […]
Fisolokiana ny anaran’ny filoha: mitaky ny hanadihadian’ny Bianco ny tena atidoha ireo nigadra
Nivoaka tamin’ny fanginany. Mangataka sy mitaky amin’ny Bianco ny hanadihadiana ny tohin’ilay raharaha fisolokiana ny anaran’ny filoham-pirenena mivady amin’ny fandefasana olona hiasa any ivelany ny fianakavian’ireo notanana am-ponja. Tahaka izany koa ireo olona manodidina ity raharaha ity, araka ny loharanom-baovao. Nambaran’izy ireo fa misy olon-kafa koa ahina ho tafiditra amin’izao raharaha izao nefa tsy mba […]
Mandroseza: ikoizana amin’ny halatra moto, tratran’ny polisy i Bolo Kely
Tratran’ny polisy avy ao amin’ny CSP2 Ambohijatovo teny amin’ny faritra Mandroseza ny jiolahy ikoizana amin’ny halatra moto fantatry ny maro amin’ny anaram-bosotra hoe Bolo kely… Jiolahy efa fanta-daza eny amin’ny kaomisarian’ny polisy izy ity ary tratra niaraka taminy koa ireo roa lahy mpivarotra moto halatra. Nanao hetsika manokana hamongorana ny fangalarana moto eny amin’ny fari-piadidiany […]
Par Les Nouvelles sur 14/05/2019 Elucubrations, NS Malagasy
Fandrarana ny tsy fizizona amina fikirizana hiraisan-jotra amina dia tsy anjaran’ny tena no voalazan’ilay fitenenana hoe «aza maditra hanaraka ahy». Hafahafa noho izay ny hevitra fonosan’ilay teny miventy fampitandremana mikasika ny fitandoman’ny loza aman-tsampona raha sady mbola hitaiza haditrana no mikasa hisisika anatin’ny laharan-dia makany amin’ny fiovana. Fanovana no tanjona, tsy hisy anefa izany moa […]
Par Taratra sur 14/05/2019 Edito Taratra, NS Malagasy
Mitodika any amin’ny any amin’ny Fitsarana miady amin’ny kolikoly, na ilay antsoina amin’ny teny frantsay hoe “Pôle anti-corruption” (Pac) ny mason’ny rehetra, manomboka izao. Izany hoe, aorian’izao nandefasan’ny Birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly (Bianco) izao ny antontan-taratasim-panadihadiany mikasika ilay raharahan-kolikoly nalaza, teny amin’ny Antenimerampirenena, herintaona lasa izay. Ilay resaka malety nisy volabe nozaraina – […]
Par Taratra sur 14/05/2019 La Une - Taratra, NS Malagasy, NS-Politique
Herintaona mahery aty aoriana, mipongatra indray ilay “Raharaha malety” sy “fizarana volabe” tamin’ny baoritra teny amin’ny hotely lehibe iray eny Ivato. Fantatra fa depiote miisa 79 mpomba ny fitondrana tamin’ny fotoan’androny ireo nandray vola 50 000 000 Ar avy ireo amin’izany. Efa eny am-pelatanan’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny kolikoly (Pac) izao ny raharaha. Tsy ho afa-bela. […]
Par Taratra sur 13/05/2019 Economie, NS Malagasy
Manoloana ny feo mandeha miparitaka any anaty tambajotra sosialy, milaza fa tsy ampy ny famatsiana solika, ny lasantsy SP 95, nanadihady nitety ny toeram-pivarotana solika eto an-dRenivohitra, ny Ofisy Malagasy misahana ny vokatra solika (OMH), sady nijery ny tahirin-tsolika amin’ny ankapobeny. Hita fa amin’ireo toby miisa 54 misy eto an-dRenivohitra, iray ihany no nanana olana […]
WWF: ho ringana amin’ny 2050 ny alan’i Menabe Antimena raha…
Anisan’ny ala maina mbola matevina ny alan’i Menabe Antimena. Potika ny 7%-ny tamin’ny taona 2017. Araka ny fanadihadian’ny WWF, ho ringana tanteraka ity ala ity amin’ny taona 2050 raha tsy misy ny fepetra haingana hiarovana azy. Nanaitra ny sain’ny rehetra ny ONG Fanamby amin’ny fihazakahan’ny fandripahana ny alan’i Menabe Antimena. Nahatsapa izany ny fikambanana iraisam-pirenena […]
« Lokon’ny fiderana »: nitondra aim-panahy vaovao
Par Taratra sur 13/05/2019 NS Malagasy, NS-Culture
Ny Antsa an’i Kristy, ny Rojon’ny Avo, i Faratiana Church, nasaina manokana ny groupe Honoré sy i Jimmy Harivelo. Tarika sy mpanakanto nanatontosa ilay fampisehoana kaonseritra evanjelika « Lokon’ny Fiderana » tao Antsahamanitra, omaly. Seho nahatsapana ilay fifamatorana akaiky eo amin’Andriamanitra sy ny olombelona izay matoky Azy. Fotoana nitondran’ireto mpanakanto ireto aim-panahy vaovao indray ho an’ireo rehetra […]
Fitantanana ny tanàna: hatsaraina ny Araben’ny Fahaleovantena
Par Taratra sur 13/05/2019 Faits Divers, NS Malagasy
Anisan’ny tapaka tamin’ny fivoriana tsy ara-potoana teo anivon’ny filankevitry ny Tanànan’Antananarivo, nifarana ny zomna teo, ny tetikasa samihafa ho fanatsarana ny eto an-dRenivohitra. Anisan’izany ny tetikasa fanatsarana sy ny hanomezana endrika ny tanàna ny eo amin’ny Araben’nyFahaleovantena. “Tafiditra amin’ny vinan’ny ben’ny Tanàna ny hahamendrika iny toerana iny sy ho ambohipihaonan’ny rehetra”, hoy ny filohan’ny filankevitry […]
« M’Foot Fokontany » – U15: tompondaka ny Selection Androhibe
Par Taratra sur 13/05/2019 NS Malagasy, NS-Sports
Nifarana, omaly teny amin’ny kianja Pèdro Akamasoa Andralanitra, ny fiadiana ny ho tompondakan’ny « M’Foot Fokontany ». Nivoaka ho mpandresy tamin’izany, teo amin’ny sokajy U15, ny ekipa voafantin’Androhibe, rehefa nanilika an-dry zareo Andrefan’i Mananjara, tamin’ny isa tokana 1 no ho 0. Baolina tafiditr’i Baina, teo amin’ny minitra fahadimin’ny fizaram-potoana voalohany. Tsiahivina fa ity fihaonana ity izay niarahan’ny […]
Basikety-“N1B Dames &U20 Garçons”: tompondaka ny CosPN2 sy ny MB2All
Nifarana, omaly tany Fenoarivo Atsinanana, ny fiadiana ny tompondaka an’i Madagasikara, N1B vehivavy sy ny U20 lehilahy, taranja basikety. Tompondaka teo amin’ny sokajy N1B ny ekipan’ny CosPN2 Atsinanana, ny ekipan’ny MB2All Analamanga kosa no nivoaka mpandresy teo amin’ny lehilahy, latsaky ny 20 taona. Raha fintinina ny lalao famaranana, isa 61 ny nandavoan’ny CosPN2 ny MB2All […]
Tontosa, omaly teny amin’ny “circuit” Imerintsiatosika, ny dingana voalohany hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja karting. Nandrombaka ny fandresena teo amin’ny sokajy “Elite”, iraisan’ireo sokajy rehetra, i Jaona Andry – Ratoby, nitondra ny Zanardi, avy amin’ny ekipazy Team Mass’in, ny voalohany. 1 mn 14 s 5 /10 ny fe-potoana tsara indrindra vitany, nihodidina in-12. Faharoa, […]
Tontosa soa aman-tsara tao amin’ny CRJS (Centre régional de la jeunesse et des sports) Toamasina ny fiadiana ny tompondaka an’i Madagasikara 2019, taranja fibatana fonjamby. Nisongadina tamin’izany i Sabrina (49 kg) sy i Tina Michel (73kg), voafidy ho atleta mendrika. Mpibata fonjamby miisa 64 avy amin’ny ligim-paritra enina, nahitana ny ligin’Atsinanana, ny ligin’Analamanga, ny ligin’IiToliara, ny […]
Nitohy, omaly alahady teny amin’ny kianja Carion Manjakandriana, ny andro fahefatra amin’ny fifanintsanana, hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja baolina kitra vehivavy “division elite”. Mbola mitarika hatrany aloha, hatreto, ny AC Sab-Nam Analamanga. Nanamafy izay toerana nisy azy izay izy ireo, tamin’ny nandreseny ny Asot Analamanga, tamin’ny isa 2 no ho 0. Baolina tafiditr’i Sitraka, […]
Mandalo fotoan-tsarotra ny Barea de Madagascar, 40 andro mialoha ny hanombohan’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja baolina kitra “Can 2019”, hatao any Egypta. Fantatra mantsy izao fa maratra ihany koa i Ibrahim Amada. Voadona teo amin’ny lohaliny ny tovolahy, nandritra ny fiadiana ny ho tompondakan’i Alzeria. Araka ny nambaran’ny mpitsabo azy, mety haharitra telo […]
Nitranga ny tsy nampoizina teo amin’ny andro fahefatra, hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja baolina kitra “THB ligue des champions”. Resin’ny 3FB Atsimo Andrefana mantsy ny AS Jet Mada Itasy. Taorian’ny nandresen’ny 3FB Atsimo Andrefana ny Cnaps Sport, teo amin’ny andro fahatelo, hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara “THB ligue des champions”, taranja baolina kitra, mbola […]
KMF/Cnoe momba ny tsy fanarahan-dalàna: “Mila fahasahiana ny fandraisana andraikitra”
Par Taratra sur 13/05/2019 NS Malagasy, NS-Politique
Be ny tsy fanarahan-dalàna amin’izao fampielezan-kevitra izao… Aiza ny Ceni sy ny HCC? Mila fahasahiana ny fandraisana andraikitra, raha ny fijerin’ny KMF/Cnoe. “Mbola azo sorohina izay amin’izao vao manomboka izao, ary tsy mbola tratra aoriana ny tokony hanaovana an’izay. Mila fahasahiana ny fandraisana andraikitra io, ary miankina amin’ny fandraisana andraikitry ny mpitondra. Tsy ny minisiteran’ny […]
Par Taratra sur 13/05/2019 Divers, NS Malagasy
Mandeha ny fotoana. 13 mey 1972-13 mey 2019: 47 taona katroka, anio, ny hetsi-bahoaka teny amin’ny kianjan’ny 13 mey 1972. Tsaroana isan-taona izay; eny, na efa tsy firy aza ny hetsika manokana ny amin’izany. Tamin’io hetsi-bahoaka io no hoe nanombohan’ny fiverimberenan’ny krizy politika lehibe eto Madagasikara. Teo ny tamin’ny taona 1972, 1991, 2001, 2009, 2019. […]
Par Taratra sur 13/05/2019 En Bref, NS Malagasy
Natao teny amin’ny CCI Ivato, ny zoma teo, ny famoahana tamin’ny fomba ofisialy ny mpampianatra hiasa eny amin’ny EPP sy CEG, rehefa niofana teny amin’ny Ivontoeram-panofanana mpampianatra INFP. 87 (andiany Miatrika) ny isan’ny mpiofana nivoaka taorian’ny fiofanana roa taona ka hiasa eny amin’ny EPP. Fiofanana momba ny fomba fampitana fahalalana, psykolojia, fahaiza-mitarika… no natrehan’ny mpianatra. […]
Tao anatin’ny efa-bolana: 293 ny ankizy noraisina ao amin’ny Centre Vonjy
Nitsidika ny ivontoerana fandraisana ankizy niharan’ny herisetra (Centre Vonjy) eo amin’ny toeram-piterahana Befelatanana ny talem-paritry ny Unicef, i Leila Pakkla, sy ny talem-paritry ny Unesco, i Ann Therese Ndong Jatta, ny alakamisy lasa teo. Nanomboka ny taona 2015 ka hatramin’ny volana avrily tamin’ity taona ity, nahatratra 2 899 ny isan’ny olona noraisina an-tanana ao amin’ny […]
Fiaraha-miasa amin’ny Unesco: hahazo tohana ny mpianatra teknika, sokajy zazavavy
Nahazo famatsiam-bola avy amin’ny Unesco ny eo anivon’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika ary ny fanofanana momba ny asa. Hapetraka miainga amin’izany famatsiam-bola izany ny klioba ho an’ny fampianarana ho an’ny siansa sy teknolojia, ny injeniera ary ny matematika (Stem). Anisan’ny hisitraka io tetikasa io ireo sekoly miisa 14 amin’ny faritra telo, ahitana an’Analamanga […]
« Précédent 1 … 4 5 6 7 8 … 1 063 Suivant »